कांग्रेसलाई पौरख चलाउन केले तगारो हाल्यो ? उत्तर अब कांग्रेसजनले आफैंभित्र खोज्नुपर्छ - Nepal Bahas Nepal Bahas
कांग्रेसलाई पौरख चलाउन केले तगारो हाल्यो ? उत्तर अब कांग्रेसजनले आफैंभित्र खोज्नुपर्छ
प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७५, शनिबार १६:१८
♥ बिक्रमभान्जा योञ्जन ♥
कुनै पार्टीको बर्वादीका लागि जुन काम कुख्यात शत्रुबाटसमेत असम्भव छ, ती सब हर्कत सोही पार्टीका सभापतिबाटै हुनपुग्छ भने त्यो पार्टीको सुरक्षित भविष्य केमा खोज्ने ? आजको नेपाली कांग्रेस यही प्रश्नको उत्तर नपाएर बेहाल अवस्थामा रहेको छ ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाएको यस पार्टीका नेतालाई संसदीय भूमिका कसरी जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने भन्ने चिन्ता छैन, सत्तारुढ पार्टीलाई कसरी रिझाएर राप्रपाकी नेतृ रहेकी र जापानका लागि राजदूत बनाइएकी आफ्नी सासुको पद कसरी थामिदिने भन्ने मात्र ध्यान छ ।
बीपी, गणेशमान,कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर ,गिरिजाप्रसाद र शुशिल कोईरालाहरूले स्थापना गरेको कांग्रेस स्वयं परिवर्तन, लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिको स्रोत–शक्ति हो भन्ने भरोसा लाग्दथ्यो । यस्तो पार्टी आज शेरबहादुर देउवाको जिम्मामा आईपुग्दा बाटो बिराएका मानिसको भीडजस्तो मात्र लाग्दैछ, जहाँ ‘शीर्ष नेता’हरू केवल आफ्नो अभिमान बढाउने र पार्टीको स्वाभिमान गिराउने खालका ठहर भए । त्यसैले कांग्रेसलाई ‘मरेका नेताहरूले बचाएको बाँचेका नेताले डुबाएको पार्टी’ भनिन्छ ।
अपराध प्रवृत्तिबाट निर्देशित राजनीति कदापि सदाचारी हुँदैन । जुन पार्टीमा उसैको इतिहासको कसीले खारिएका विचारधारा, नीति र सिद्धान्तकै हत्या हुन्छ, त्यस पार्टीको भविष्य बाँकी रहँदैन । आजको कांग्रेसमा त्यस्तो भवितब्य उत्पन्न भइसकेको छ । कांग्रेसको आन्तरिक अवस्था अत्यन्त लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा पु¥याइएको छ । पार्टीका विभागहरूको गठन नभएको वर्षौ भइसक्यो । भातृसंस्थाहरूलाई पक्षाघातपूर्ण र स्खलित अवस्थामा राख्ने हर्कत भएको छ । पार्टीका प्रचार–प्रसार र प्रकाशन संयन्त्रबारे त सोच्ने काम पनि हुन छोड्यो ।
राजनीति नै दुस्साहस, अपराध, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र सम्पूर्ण अनैतिक तथा फोहोरी तरिकाबाट चलाइन्छ भने त्यो मुलुकका राज्य–अंगहरू कसरी स्वच्छ र जनसेवी हुनसक्छन् ? पार्टीहरूमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, आर्थिक अनुशासनहिनता, अपारदर्शी गतिविधि र छाडापनको एकमुष्ट प्रभाव मुलुकको शासन–प्रशासन र पार्टीको तल्लो निकायसम्म पुगेको छ । स्थानीय तहमा पठाइएको सरकारी अनुदान पार्टीका प्रतिनिधिहरूले बाँडेर खाने प्रवृत्तिको विकास भ्रष्टाचारको एउटा अवतार हो । यसका लागि तिनले पाउने दुस्साहसको प्रेरणा पार्टीभित्र पन्पिरहेको यस्तै चरित्र हो ।
काङ्ग्रेस एउटा दल तर अनेकौं दिल भएको र दिल नमिलेको पार्टी हो । बीपी, गणेशमान,कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर ,गिरिजाप्रसाद र शुशिल कोईरालाहरूले स्थापना गरेको कांग्रेस स्वयं परिवर्तन, लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिको स्रोत–शक्ति हो भन्ने भरोसा लाग्दथ्यो । यस्तो पार्टी आज शेरबहादुर देउवाको जिम्मामा आईपुग्दा बाटो बिराएका मानिसको भीडजस्तो मात्र लाग्दैछ, जहाँ ‘शीर्ष नेता’हरू केवल आफ्नो अभिमान बढाउने र पार्टीको स्वाभिमान गिराउने खालका ठहर भए । त्यसैले कांग्रेसलाई ‘मरेका नेताहरूले बचाएको बाँचेका नेताले डुबाएको पार्टी’ भनिन्छ ।
जसलाई साथ दिएका छन् एकदर्जन राजनीतिक लठैतहरूले । विभाजनकारी र भागबन्डाको कुसंस्कार कांग्रेस पार्टीमा यति नराम्रोसँग हावी भएको छ कि, योग्य, जनप्रिय, परिश्रमी र पराक्रमी कार्यकर्तालाई लत्याएर हुक्के,ढोके,बैठके र आसेपासेलाई अवसर दिने प्रवृत्ति अनियन्त्रित हुँदैछ । यसले गर्दा पार्टीका स्वाभिमानी, ऊर्जावान तथा नयाँ पुस्ताका होनहार कार्यकर्ताहरूको आस्था र निष्ठा डग्मगाउने, टिक्नै नसक्ने वा पलायन हुने विवश वातावरण पैदा गरिँदैछ । यही मनोवृत्ति र ब्यवहारलाई बढावा दिएर पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थको निजी मौजाझैं बनाइरहेका छन् ।
संस्थापक नेताहरूले छोडेर गएको सिद्धान्त, मान्यता, विचार, आदर्श, सभ्यता र परम्परा आज कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका दोपायाहरूमा हस्तान्तरण हुन नसकेको अवस्था नै नेपाली कांग्रेसको दुर्दशा हो । पार्टी फुटाएको आपराधिक मनोवृत्ति त्याग्न नसकेको चरित्रबाट ह्याकुल्लाले मिचेर पार्टी हाँक्ने कसरत भइरहेको छ, जसलाई साथ दिएका छन् एकदर्जन राजनीतिक लठैतहरूले । विभाजनकारी र भागबन्डाको कुसंस्कार कांग्रेस पार्टीमा यति नराम्रोसँग हावी भएको छ कि, योग्य, जनप्रिय, परिश्रमी र पराक्रमी कार्यकर्तालाई लत्याएर हुक्के,ढोके,बैठके र आसेपासेलाई अवसर दिने प्रवृत्ति अनियन्त्रित हुँदैछ । यसले गर्दा पार्टीका स्वाभिमानी, ऊर्जावान तथा नयाँ पुस्ताका होनहार कार्यकर्ताहरूको आस्था र निष्ठा डग्मगाउने, टिक्नै नसक्ने वा पलायन हुने विवश वातावरण पैदा गरिँदैछ । यही मनोवृत्ति र ब्यवहारलाई बढावा दिएर पार्टीलाई आफ्नो स्वार्थको निजी मौजाझैं बनाइरहेका छन् ।
आफ्नो ३ पटकको प्रधानमन्त्रीत्वकाल र पार्टी सभापतिको कार्यकालमा शेरबहादुर देउवाले जति कांग्रेस उपर जघन्य अपराध सायदै अरुले गरेका होलान् । २०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला संसद र संसदीय पद्धतिलाई नै बदनाम गर्ने हर्कतका श्रृङ्खलालाई लिएर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश स्व. विश्वनाथ उपाध्यायले एउटा रिसेप्सनमा पछुतो मान्दै भनेका थिए, “यति चुत्था गतिविधि भएको देख्दा मलाई आफ्नै फैसलाप्रति थक्कथक्क लागिरहेको छ ।”
गतवर्ष भएका राज्यका तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले शर्मनाक पराजय भोग्नुप¥यो । सर्वोपरि कारण थियो, स्वयं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा । सांसदका टिकटदेखि राजदूत पदसम्म करोडौं असुलेर बेच्नु, आईजीपी नियुक्तिमा आफ्नै विश्वासप्रात्र विमलेन्द्र निधिको घुस्याहा हर्कतले आफ्नो र पार्टी कै बदनाम हुदाँ पनि लगाम लगाउन नसक्नु , प्रचण्डकी छोरीलाई मेयरमा जिताउन हसियाँ–हतौडामा भोट माग्न आफैं माओवादीको चितवन चुनावी सभामा गएर भाषण गर्नु, पार्टीमा गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिनु, मूल्य र मान्यतामा आधारित सैद्धान्तिक तथा वैचारिक राजनीतिलाई तिलान्जली दिनु आदि देउवाका राजनीतिक अपराध हुन् ।
यिनले कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेर केमात्र अपराध गरेनन् ! पार्टीलाई आफ्नो निजी स्वार्थमा बदनाम गर्ने, माथिदेखि तलैसम्म फुटाएर दुई चिरा पार्ने, पजेरो कुसंस्कार भित्र्याउने, सांसदहरूलाई होटलमा राखेर सुरा, सुन्दरी र सम्पत्तीमा फसाउने आदि काम सम्झिँदा जनताले हाईहाई गर्ने सत्कार्य यिनले कहिल्यै गर्दै गरेनन् । राजाको सक्रिय शासनलाई टेको–पुँडो लगाउने सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुरमध्येका ‘तीन बहादुर’ मध्य शेरबहादुर एक हुन् ।
बनाईदिए त हुन्छ उनीमात्र किन जुनसुकै गोफ्लेलाई ल्याएर विराजमान गराए पनि चाकरी गर्ने दासदासीको कांग्रेसमा कमी छैन । कांग्रेसीहरू नै उनलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पत्याउँदैनन् । दुईटा कमजोरीका कारण उनलाई नपत्याएको देखिन्छ । पहिलो कमजोरी यिनी साह्रै संकीर्ण मानसिकताका छन् भन्ने आरोप छ । दोस्रो, यिनी आफ्नो चिन्ता गर्ने बाहेक अरू कसैको परवाह गर्दैनन् ।
नेताहरूले नलिनु भन्दाभन्दै राजाबाट गोरखा दक्षिणबाहु (तक्मा) लिएको, जुद्ध शम्शेरकी नातिनीसँग बिहे नगर भन्दाभन्दै त्यसलाई पनि धोती लगाएर विवादास्पद आईमाईलाई भित्र्याएको, राजा वीरेन्द्रको नागरिक अभिन्दन गराएको आदि कारणले कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवालाई ‘शाही कांग्रेस’ भन्ने गरिएको थियो ।
देउवालाई जस्तो रामचन्द्र पौडेललाई खोट लगाउने त्यस्ता कमजोरी देखिन्नन् । सुरा, सुन्दरीजस्ता मानिसको छवि ध्वस्त पार्ने विषयमा यिनी लम्पट पनि छैनन् । पैसाका मामिलामा आफुलाई यिनी ‘कन्जुस सम्राट’ भन्ने गर्छन् । ‘रामचन्द्रलाई राजकाज’ को संयोग मिलेजस्तो अहिले पनि लाग्दैन । उनलाई पार्टी सभापति बनाइदिनु अर्को दुर्दशा निम्त्याउनु हो । बनाईदिए त हुन्छ उनीमात्र किन जुनसुकै गोफ्लेलाई ल्याएर विराजमान गराए पनि चाकरी गर्ने दासदासीको कांग्रेसमा कमी छैन । कांग्रेसीहरू नै उनलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा पत्याउँदैनन् । दुईटा कमजोरीका कारण उनलाई नपत्याएको देखिन्छ । पहिलो कमजोरी यिनी साह्रै संकीर्ण मानसिकताका छन् भन्ने आरोप छ । दोस्रो, यिनी आफ्नो चिन्ता गर्ने बाहेक अरू कसैको परवाह गर्दैनन् ।
विदेशीहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ छ । चीन नेपालबाट तिब्बत विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भन्नेमा पहिले भन्दा निकै सचेत र सतर्क भइरहेको छ । सत्तारुढ ने.क.पा. र कांग्रेसलाई ‘माले’ र ‘तारे’ बनाई जोतेको भेउ नपाउने हुस्सुहरूको नेतृत्वमा ठसमस छ । उसको नेपालभित्र यही कारणले गर्दा चलखेल बढिरहेको छ । भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र सुरक्षा–छाताभित्रको इलाका भन्ने ब्रिटिशकालीन धारणा र ह्याङ्ओभरबाट मुक्त छैन ।
अमेरिकालाई नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकार होस् वा नहोस्, तर नेपालबाट तिब्बत मामिलामा चीनलाई सताउन पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने ध्याउन्न मात्र छ । चीनको “ओन बेल्ट एन्ड ओन रोड ” रणनीतिका विरुद्ध अमेरिकाले “इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड”तिर नेपाललाई तान्न कोशिश गरिरहेको छ । बेलायत तथा युरोपेली मुलुकहरू यहाँ गैरसरकारी संस्थाहरूलाई घाँस हालेर जातीयता र धर्मपरिवर्तनका गुप्त गतिविधि मच्चाइरहेका छन् । सुशासनको नारा उनीहरू नै उराल्छन्, तर गैरसरकारी संस्थाका नाममा समानान्तर सरकार चलाएर द्वैध शासनको प्रत्याभूति दिइरहेका छन् । त्यसकारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति विथोल्नमा विदेशीहरूको प्रत्यक्ष हात रहेको छ ।
बीपीले कांग्रेसलाई जनताका बीच क्रियाशिल हुने वैचारिक र प्रजातान्त्रिक संस्कारयुक्त कार्यदिशा सिकाउनु भयो । पार्टीको मध्यमार्गी यात्रा र जनताको उच्चतम हितजन्य गन्तब्य तय गर्नुभयो । राजतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, संविधान, दक्षिण एशियामा नेपालको भूमिका, राजनीतिक कार्यकर्ताको जनतामा भूमिका, विदेशी खतरा, उग्रवाद, अधिनायकवाद, अर्थतन्त्रको ढाँचा, विरोधी पक्षसँगको सम्बन्ध भारत, चीन, साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति, आदि यावत पक्षमा उहाँले सुस्पष्ट विचारधारा छोडेर जानुभएको थियो । ‘बीपीका विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्’ भन्ने कांग्रेस नेताहरू ‘उहाँका सपना साकार पार्छौ’ चाहिँ किन भन्दैनन् ? यही प्रश्नमा बीपी बारे कांग्रेस नेताहरूको नियत उदाङ्गिन पुग्छ । बीपीको फोटोमा फूल फ्याँकिदिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भयो भनिठान्ने नेताबाट अरू के आशा राख्ने !
आर्थिक अनुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, दण्डहिनताजस्ता मुलुकको वर्वादीका मुख्य रोगले पार्टीहरूलाई सुरक्षित आश्रयस्थल र कतिपय नेतालाई त संरक्षक बनाएका छन् । कुनै पार्टीले पनि यस्ता रोग भित्र्याउने आफ्नो कुनै नेता वा कार्यकर्तालाई पार्टीगत कारवाही गरेको अपवाद पनि छैन, बरू उनीहरू नै नेतृत्व र निर्णयकर्ता बन्न पुगेका छन् । कुनैपनि पार्टीको सामथ्र्य, उपयोगिता र लक्ष्यप्राप्तिलाई अनुशासनले मात्र सम्भव बनाउँछ । तर कांग्रेसभित्र अनुशासन नै छैन भने हुन्छ । कसैले पार्टीहित विपरितका छाडा बकवास गर्दै हिँड्दा पनि देख्या नदेख्यै गर्ने, कसैलाई अनुशासनको डण्डा निजको पत्तासाफ पार्ने वा प्रतिशोधको नियतले गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसले पार्टीमात्र होइन, नेतृत्वको आसनका पेचकिला पनि खुकुल्याइदिएको छ । पदाधिकारी नेताहरूलाई रौं जति पनि मतलब छैन । उनीहरू यतिखेर कार्यकर्तालाई थाङ्नामा सुताएर पार्टी कब्जा गर्ने ध्याउन्नमा दौडिरहेका छन् ।
हिजो राजतन्त्र रहँदासम्म आफ्ना सबै दोषका लागि राजतन्त्रतिर देखाएर कांग्रेसको बाटोमा दरबार नै तगारो भइदियो भनी अर्थ लगाइदिँदा तत्कालका लागि नाक जोगाउने उपाय हुन्थ्यो । तर राजतन्त्र नभएका यी दिनमा कांग्रेसलाई आफ्नो पौरख चलाउन केले तगारो हाल्यो ? यसको उत्तर अब कांग्रेसले अन्यत्र होइन, आफैंभित्र खोज्नुपर्दछ र गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कांग्रेसलाई महँगो भइरहेको त होइन ? प्रष्ट हुनैपर्छ ।
आजसम्म कांग्रेसमा नेताको युग थियो । अब कार्यकर्ताको युग आउनुपर्छ, जसमा जनभावना र चाहनाको प्रतिबिम्ब होस् । जनता वा कार्यकर्ता नेताहरुको दरवारमा जाने होईन कि अब नेताहरु कार्यकर्ता र जनताको घरदैलो पुग्नुपर्छ । नेतृत्वले नेताप्रेमी कार्यकर्ता होइन, जनताप्रेमी कार्यकर्तालाई अवसर दिउन् । हुक्के,ढोके,वैठके र चाकडीबाज कार्यकर्तालाई नेताले पाखा लगाउन सक्नु पर्यो । सिद्धान्त, नीति, मूल्य–मान्यता र नैतिक शक्ति निर्णायक हुन पाओस् ।
लोकतन्त्रको अगुवा शक्ति भनिने नेपाली कांग्रेसको वर्तमान चरित्र पैतृक सम्पत्तिको अंशका रूपमा हातपरेको, बजार साँघुरिएको र यथास्थितिमा चलेको पुरानो कम्पनीजस्तो मात्र हुँदैछ जहाँ कोइराला, देउवा र पौडेल (कोदेपौ) मुख्य शेयरहोल्डर भएका छन् । उनीहरू आ–आफ्ना भागको लाभांशमात्र हिसाब गर्दछन् तर कम्पनीको बजार विस्तारका लागि सिन्को पनि भाँच्न नचाहने/नसक्ने हदैसम्मका नालायक साहु झैँ लाग्दछन् । एउटा प्रतिष्ठित लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतन्त्रको युगमै घिसिपिटी चलेको बिजनेश कम्पनीमा रूपान्तरण हुनु लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि कति स्वागतयोग्य होला, त्यो त उत्तरदायित्व बोकेकाले नै जान्ने कुरा हो ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक पतन सबभन्दा घातक हुने धरातलीय यथार्थलाई नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूमा भइरहने जोड र तोड, गुटबन्दी र तानातानका परिणामहरूले देखाइरहेका छन् । पार्टीभित्रबाट निस्किरहने फोहोरी राजनीतिको दुर्गन्धित झोल जनतामा पुग्नेगरेको छ, जसबाट कांग्रेस जोगिएको छैन । पार्टीभित्र मौलाएका विकृति र असंगतिप्रति कडाइका साथ उपचारात्मक कदम चलाइएन भने ‘रूखभन्दा ऐँजेरु ठूलो’ भएर रूखलाई मार्छ अनि ऐँजेरु पनि मरेर जान्छ ।
निती ठीक नेता वेठीक भएको कांग्रेसको पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन कहिले हुने हो यसै भन्न सकिन्न, तर त्यो महाधिवेशनमा नेताहरू होइन क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूको निर्भिक र निर्णायक सक्रियता कांग्रेसका लागि अति जरुरी भईसकेको छ । कांग्रेसरुपी बस त ठीक छ तर त्यसलाई हाक्ने ड्राईभर, कन्डक्टर र टिकट बुकिङ गर्ने दलालहरु परिर्वतन नभएसम्म कांग्रैस पनि सुध्रिदैन् ,देश पनि बन्दै बन्दैन । चेतना भया । ( लेखक योञ्जन नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् )
#Bikram vanja yonjan
८६ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक, कांग्रेस ३४ र एमाले ३१ पालिका प्रमुखसहित प्रतिस्पर्धामा
हेलचेक्रयाइँको सिकार घोडचढी शालिक
सूर्यविनायक नगरपालिका–२ ओलीको वडामा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी
आजको मौसम: पाँच वटा प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
स्मार्टफोन एप र ड्रोनबाट लामखुट्टे पत्ता लगाइने, मलेरियासँग लड्न मदत…
चुनाव सकेसँगै यार्सागुम्बा टिप्न लेक उक्लिए मनाङी
चुनाव सकेसँगै यार्सा टिप्न लेक उक्लिए मनाङी